ဇာဗီရဲ့ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် ဆမ်ဘာကြယ်ပွင့်
ဇာဗီ Xavi ရဲ့ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် ဆမ်ဘာကြယ်ပွင့် (သို့) အာသာမယ်လို Arthur Melo
2 Nov 2018 . 4:21 PM
၂၀၁၈၊ ဇူလိုင် (၉)ရက်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းက အာသာမယ်လို Arthur Melo ကို ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ ဘရာဇီးလ်မြေမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်နေပေမယ့် ဥရောပမှာတော့ လူသိနည်းတဲ့ ကစားသမားဖြစ်လို့ အားလုံးက သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ နူးကမ့်ဟာ ဆမ်ဘာတေးသွားတွေ ချိုမြိန်စွာ ပျံ့လွင့်တတ်တဲ့ နေရာ။ သူတို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်ကစားသမား အများစုက အောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းပိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေချည်းပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ဘာစီလိုနာအသင်းက အာသာအတွက် ယုံယုံကြည်ကြည် ငွေသုံးခဲ့တာပေါ့။
အာသာဆိုတာက ကွင်းလယ်မှာ နေရာစုံ ကစားနိုင်တဲ့ Versatile Midfielder တစ်ဦးပါပဲ။ Central Midfielder ၊ Attacking Midfielder ၊ Defensive Midfielder နေရာအမျိုးမျိုးကို ပွဲရဲ့အနေအထားအပေါ် မူတည်ပြီး Flexible ဖြစ်အောင် ကစားနိုင်တယ်။ အာသာရဲ့ အဓိက အားသာချက်က ကွန်ပြူတာနဲ့ တွက်ချက်ထားသလို တိကျတဲ့ Passing Ability ၊ ဘောလုံးအမြင်ကောင်းမွန်မှု စတာတွေပဲ။
အဲဒါကြောင့်လည်း အာသာကို ဇာဗီ Xavi လက်သစ်လို့ မီဒီယာတွေက တင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်ကလပ် ဂရေမီယိုမှာ ကစားတုန်းက ဘရာဇီးလ်လိဂ်မှာ ဘောလုံးပေးပို့မှုပေါင်း (၂၀၀၀)ကျော်၊ အောင်မြင်တဲ့ ပေးပို့မှုက (၉၃.၁)ရာခိုင်နှုန်းအထိ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာက သူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ Short Passing ကောင်းမွန်လို့လည်း သူ့ကစားဟန်က ဘာစီလိုနာနဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေတယ်။ အရပ်အမြင့် (၅)ပေ၊ (၈)လက်မသာ ရှိပေမယ့် မက်ဆီ Messi ၊ မာရာဒိုနာ Maradona တို့လိုပဲ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲငင်အားကို ပိုရလို့ တခြားကစားသမားတွေထက် Balance ပိုညီတဲ့အပြင် Body Movement မှာလည်း တခြားကစားသမားတွေထက် အားသာချက် ပိုများတယ်။
အာသာအတွက် အားနည်းချက်ကတော့ Physical ပိုင်းပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ ကစားသမားတွေ အမြဲရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာပါ။ Physical ပိုကောင်းတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ အာသာဟာ ရုန်းကန်ရလေ့ရှိတယ်။ အားနည်းချက်နောက်တစ်ခုက မလိုအပ်ဘဲ ဘောလုံးကို ခြေထောက်ထဲမှာ အချိန်ကြာကြာ ထားပြီး ကစာတာပါ။
အဲဒါကြောင့် ပြိုင်ဘက်တွေ ဘောလုံးလုယူဖို့ အခွင့်အရေးပေးသလို ဖြစ်တဲ့အပြင် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကလည်း အရှိန်ကျဆင်းသွားတတ်တယ်။ နောက်ပြီး အာသာဟာ Naturally Creative Player တစ်ဦး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသင်းဖော်တွေအတွက် ဂိုးဖန်တီးပေးတာမှာ အင်နီယေစတာ Iniesta လိုမျိုး စွန့်စွားပြီး Risky Passes တွေ မလုပ်ဘဲ အများစုက သာမန် Passing တွေဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အာသာရဲ့ အသက်က (၂၂)နှစ်သာ ရှိသေးလို့ ဒီထက်ပို တိုးတက်လာဖို့တော့ ရှိနေပါတယ်။
ဘာစီလိုနာမှာ ဇာဗီ မရှိတော့ကတည်းက မက်ဆီ Messi နဲ့ ဘူးစကွက်စ် Busquets တို့ကြားမှာ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ခံစစ်၊ တိုက်စစ် ကစားနိုင်တဲ့သူ ပျောက်ဆုံးနေပေမယ့် အဲဒီကွက်လပ်ကို အာသာက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဇာဗီရဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတုန်းပဲဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ အသက်အရွယ်၊ လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည် မှတ်တမ်းတွေက ဇာဗီလိုဖြစ်ဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အာသာကို ဇာဗီရဲ့ ကွက်လပ် ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် ဆမ်ဘာကြယ်ပွင့်တစ်ဦးလို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါရစေ . . .
Photo:Getty Images,Everything Barca,Goal,Perú21,Besthqwallpapers
ဇာဗီ Xavi ရဲ့ ကှကျလပျကို ဖွညျ့ဆညျးပေးမယျ့ ဆမျဘာကွယျပှငျ့ (သို့) အာသာမယျလို Arthur Melo
၂၀၁၈၊ ဇူလိုငျ (၉)ရကျမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးက အာသာမယျလို Arthur Melo ကို ချေါယူခဲ့တယျ။ ဘရာဇီးလျမွမှော လြှမျးလြှမျးတောကျနပေမေယျ့ ဥရောပမှာတော့ လူသိနညျးတဲ့ ကစားသမားဖွဈလို့ အားလုံးက သံသယမကျြလုံးတှနေဲ့ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ နူးကမျ့ဟာ ဆမျဘာတေးသှားတှေ ခြိုမွိနျစှာ ပြံ့လှငျ့တတျတဲ့ နရော။ သူတို့ ချေါခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျကစားသမား အမြားစုက အောငျမွငျမှုတှေ သိမျးပိုကျခဲ့ဖူးတဲ့ သူတှခေညျြးပဲ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဘာစီလိုနာအသငျးက အာသာအတှကျ ယုံယုံကွညျကွညျ ငှသေုံးခဲ့တာပေါ့။
အာသာဆိုတာက ကှငျးလယျမှာ နရောစုံ ကစားနိုငျတဲ့ Versatile Midfielder တဈဦးပါပဲ။ Central Midfielder ၊ Attacking Midfielder ၊ Defensive Midfielder နရောအမြိုးမြိုးကို ပှဲရဲ့အနအေထားအပျေါ မူတညျပွီး Flexible ဖွဈအောငျ ကစားနိုငျတယျ။ အာသာရဲ့ အဓိက အားသာခကျြက ကှနျပွူတာနဲ့ တှကျခကျြထားသလို တိကတြဲ့ Passing Ability ၊ ဘောလုံးအမွငျကောငျးမှနျမှု စတာတှပေဲ။
အဲဒါကွောငျ့လညျး အာသာကို ဇာဗီ Xavi လကျသဈလို့ မီဒီယာတှကေ တငျစားနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဘရာဇီးလျကလပျ ဂရမေီယိုမှာ ကစားတုနျးက ဘရာဇီးလျလိဂျမှာ ဘောလုံးပေးပို့မှုပေါငျး (၂၀၀၀)ကြျော၊ အောငျမွငျတဲ့ ပေးပို့မှုက (၉၃.၁)ရာခိုငျနှုနျးအထိ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တာက သူတဈယောကျပဲရှိတယျ။ Short Passing ကောငျးမှနျလို့လညျး သူ့ကစားဟနျက ဘာစီလိုနာနဲ့ ကှကျတိဖွဈနတေယျ။ အရပျအမွငျ့ (၅)ပေ၊ (၈)လကျမသာ ရှိပမေယျ့ မကျဆီ Messi ၊ မာရာဒိုနာ Maradona တို့လိုပဲ ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့ ဆှဲငငျအားကို ပိုရလို့ တခွားကစားသမားတှထေကျ Balance ပိုညီတဲ့အပွငျ Body Movement မှာလညျး တခွားကစားသမားတှထေကျ အားသာခကျြ ပိုမြားတယျ။
အာသာအတှကျ အားနညျးခကျြကတော့ Physical ပိုငျးပါပဲ။ ခန်ဓာကိုယျသေးတဲ့ ကစားသမားတှေ အမွဲရငျဆိုငျရလရှေိ့တဲ့ ပွဿနာပါ။ Physical ပိုကောငျးတဲ့ ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါ အာသာဟာ ရုနျးကနျရလရှေိ့တယျ။ အားနညျးခကျြနောကျတဈခုက မလိုအပျဘဲ ဘောလုံးကို ခွထေောကျထဲမှာ အခြိနျကွာကွာ ထားပွီး ကစာတာပါ။
အဲဒါကွောငျ့ ပွိုငျဘကျတှေ ဘောလုံးလုယူဖို့ အခှငျ့အရေးပေးသလို ဖွဈတဲ့အပွငျ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈကလညျး အရှိနျကဆြငျးသှားတတျတယျ။ နောကျပွီး အာသာဟာ Naturally Creative Player တဈဦး မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အသငျးဖျောတှအေတှကျ ဂိုးဖနျတီးပေးတာမှာ အငျနီယစေတာ Iniesta လိုမြိုး စှနျ့စှားပွီး Risky Passes တှေ မလုပျဘဲ အမြားစုက သာမနျ Passing တှဖွေဈနတောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အာသာရဲ့ အသကျက (၂၂)နှဈသာ ရှိသေးလို့ ဒီထကျပို တိုးတကျလာဖို့တော့ ရှိနပေါတယျ။
ဘာစီလိုနာမှာ ဇာဗီ မရှိတော့ကတညျးက မကျဆီ Messi နဲ့ ဘူးစကှကျဈ Busquets တို့ကွားမှာ ခြိတျဆကျပေးပွီး ခံစဈ၊ တိုကျစဈ ကစားနိုငျတဲ့သူ ပြောကျဆုံးနပေမေယျ့ အဲဒီကှကျလပျကို အာသာက ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဇာဗီရဲ့ အဆငျ့ကို ရောကျဖို့ လိုအပျခကျြတှေ ရှိနတေုနျးပဲဆိုပမေယျ့ သူ့ရဲ့ အသကျအရှယျ၊ လကျရှိစှမျးဆောငျရညျ မှတျတမျးတှကေ ဇာဗီလိုဖွဈဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အာသာကို ဇာဗီရဲ့ ကှကျလပျ ဖွညျ့ဆညျးပေးမယျ့ ဆမျဘာကွယျပှငျ့တဈဦးလို့ပဲ သတျမှတျလိုကျပါရစေ . . .